ဆေးဆိုးစက်များ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ ဆေးဆိုးစက်များ အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
ကျနော်တို့နည်းပညာဆိုင်ရာများမှာ ဆေးဆိုးစက်များ အတွက်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ပို့ကုန်နှင့်စက်ရုံမှာ Taiwan။ ကျနော်တို့ကိုလည်းဝယ်ယူသူအတွက်သင့်လျော်သောဂုဏ်သတင်းတို့ထုတ်လုပ်သူကနေထုတ်ကုန်များဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းလက်တွဲဖော်အဖြစ်ကို service provider နှင့်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်။ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုတစ်ရပ်တန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖောက်သည်များ, ကန်ထရိုက်တာများအဘို့အန်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်သောကျေးဇူးကို။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းအရည်အသွေးပြည့်ကျော်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အချိန်မီပေးပို့ခြင်းအတွက် vender နှင့်အတူ Co-ordinating သေချာအဖြစ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုတဆင့်မဝယ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဝယ်လက်စီးပွားရေးစွန့်မှုများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ပုံစံ - AM-OH
အစွန်းရောက်အနိမ့်အရက်အချိုး 1:4~5,ရေကို minimize လုပ်ပါ,ဓာတုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,စွန့်ပစ်ရေသန့်သန့်ရှင်းရေးကိုလည်းကျဆင်းသွားသည်.
ဆိုးဆေးအချိန်ဆိုးဆေးသက်သာစေရန်ရေကို preheating များအတွက် tank preheating.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.dyeing-machine.com/my/dyeing-machines.html
110&ထုံးစံအတိုင်း;Flow Rapid ဆိုးဆေးစက်ကျော် အသွင်အပြင် MAX.အလုပ်လုပ်အပူချိန် 110̊ဂ အလွန်နိမ့်ယိုယွင်းမှုဆိုးဆေးဆိုးဆေး CREASE MARK အခမဲ့ဖြစ်သည်,အထည်ထိထိတွေ့မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ ပိတ်ထည်ထဲကနေပျံ့နှံ့ UNIFORM ဆိုးဆေး အလိုအလျောက်ဓာတုဆေးထိုးစနစ် စီးဆင်းမှုဆေးကြောစနစ်အထူး အနိမ့်တင်းမာမှုနှင့် Pilling လျော့နည်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အကောင်းဆုံး ဆေးဆိုးစက်များ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ဆေးဆိုးစက်များ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ဆေးဆိုးစက်များ ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အင်္ဂါရပ်များ စီးဆင်းမှုဆေးဆိုးခြင်းစနစ်အထူး အလွန်အမင်းနိမ့်အရက်အချိုးအစား ဆေးလုံးအခမဲ့,နိမ့်တင်းမာမှု,မြင့်မားသော elasticity CREASE MARK UNIFORM ဆေးဆိုးခြင်းများအခမဲ့ဖြစ်သည် ပိတ်ထည်ထဲကနေပျံ့နှံ့ အာကာသလိုအပ်ချက်သိမ်းဆည်းပါ အလိုအလျှောက်သန့်ရှင်းရေးစနစ် အထူး Overflow သုတ်ခြင်းစနစ် အလိုအလျောက်ဓာတုပစ္စည်းစနစ် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက် အင်္ဂါရပ်များ အလွန်အမင်းနိမ့်အရက်အချိုးအစားအစွန်းရောက်အနိမ့်အရက်အချိုး 1:4~ရေကို minimize လုပ်ဖို့ 5,ဓာတုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,ထို့အပြင်အလဟ water ဖြစ်သွားသည့်ရေသန့်စင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်.ထို့ကြောင့်,ပတ် ၀ န်းကျင်တိုးတက်စေရေးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်. ချကိရိယာဆေးဆိုးပြွန်ရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ကိရိယာတန်ဆာပလာများတပ်ဆင်ထားသည်,ဆိုးဆေးနှင့်ဆိုးဆေးစွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်ရှောင်ရှားရန်အခန်းများသို့စနစ်တကျကျဆင်းသွားစေရန်သေချာစေရန်. Stain တွေကိုရှောင်ပါစက်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သည်အစွန်းအထင်းများကိုရှောင်ရှားရန်ဖန်ခွက်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်သည်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အင်္ဂါရပ်များ နေရာလိုအပ်ချက်သိမ်းဆည်းပါ. စက်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သည်ပုတီးစေ့များကိုပေါက်ကွဲစေသည်. စက်၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်တွင်ထည်များမဖောင်းပွစေရန်ရှောင်တိမ်းခြင်းကဲ့သို့သောမှန်များရှိသည်. အပိုထည့်သည့်တိုင်ကီ၏သွယ်ဝိုက်ရောစပ်ပေးခြင်းသည်အထိခိုက်မခံသောဆိုးဆေးပစ္စည်းများကိုခဲခြင်းမှရှောင်ရှားသည်. အခန်းတိုင်းရှိ Teflon စာရွက်သည်အထည်များကိုချောမွေ့စွာရွေ့လျားစေသည်&ဆေးပြားကိုရှောင်. microprocessor နှင့် temperature controller နှစ်ခုလုံးတပ်ဆင်ထားသောစက်များကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်သို့မဟုတ် Semiutomatic ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်. အမှန်တကယ်ထည်ပြေးမြန်နှုန်းကိုပြသနိုင်ဖို့ချုပ်ရိုး detector,နှင့်တော်လှန်ရေးနှုန်းသည်၎င်း၏သံသရာအချိန်.ချုပ်ရိုးကိုလည်းအလိုအလျှောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
ကျော် Flow ပုံမှန်ဖိအား Rapid ဆိုးဆေးစက် အင်္ဂါရပ်များ ဆန်းသစ်သောဖွဲ့စည်းပုံလွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုနှင့်ကျယ်ပြန့်သောသက်ဆိုင်မှုdual စီးဆင်းမှုစနစ်၏တီထွင်ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းသည်နိုင်ငံများစွာတွင်မူပိုင်ခွင့်တင်ထားပြီး overflow dyeing နှင့် jetflow dyeing များအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။.ဒါဟာအပြည့်အဝလျှံဆိုးဆေးနှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်,အပြည့်အဝ jetflow ဆေးဆိုးသို့မဟုတ်တစ်ပိုင်း-ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်အညီ jetflow ဆေးဆိုး,ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလေးချိန်(700 ကျော် gm/yd)ထိုကဲ့သို့သောဝါဂွမ်းအဖြစ်ယက်သို့မဟုတ်ဇာထိုးထည်၏,ကော့တေး,သိုးမွှေး,polyester,နိုင်လွန်နှင့်ပေါင်းစပ်စသည်တို့ဖြစ်သည်.မူပိုင်ခွင့်ဆေးဆိုးစနစ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ,ဆေးပြားနဲ့တူအားလုံးချို့ယွင်းချက်,ဖွဲ့စည်းပုံပုံပျက်သောနှင့်တွန့အမှတ်အသားများလုံးဝတားဆီးနိုင်ပါတယ်.အပြင်,အလွန်ကောင်းမွန်သောကျုံ့ထိန်းချုပ်မှုကိုတင်းမာမှုမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်-ဇာထိုးအထည်များအတွက်လျတ်ဆေးဆိုး၏လျော့နည်း.နိမ့်ကျခြင်းနှင့်ကြီးမားသောဝင်ရောက်ခွင့်တံခါးကိုလူ့အင်ဂျင်နီယာများအရဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်.ပလက်ဖောင်းမလိုအပ်ပါဘူး,လွယ်ကူပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်သည်.၎င်း၏အလေးချိန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တင်းမာမှုအင်အားကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်.အပြည့်အဝအလိုအလျောက်သို့မဟုတ်တဝက်-အော်တိုထိန်းချုပ်မှုစနစ် optioned နိုင်ပါသည်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Dyeing Machines	| Machines De Teinture	| Färbemaschinen	| Красящие Машины	| Máquinas De Tingimento	| Macchine Per Tintura	| रंगाई मशीनें	| Máquinas De Teñir	| Verfmachines	| ماكينات الصباغة	| Máy Nhuộm	| เครื่องย้อมสี	| Mesin Pencelupan	| রঞ্জনবিদ্যা মেশিন	| Boyama Makinaları	| 高温高速染色机